Josia sy Holda
"Mandehana hianareo, ka manontania amin'i Jehôvah ho ahy sy ny vahoaka mbamin'ny Joda rehetra ny amin'ny tenin’ity boky vao hita ity, fa mafy ny fahatezeran'i Jehôvah izay mirehitra amintsika noho ny tsy nihainoan'ny razantsika ny tenin'ity boky ity hanao araka izay rehetra voasoratra ho antsika." 2 Mpanj. 22:13.
Hatramin'ny vao naha-lehilahy lehibe azy dia efa niezaka nanararaotra ny toerana maha-mpanjaka azy i Josia mba hanandratana ireo foto-kevitry ny lalàna masin'Andriamanitra. Koa ankehitriny raha namaky teo anatrehany izay voasoratra tao amin'ny bokin'ny lalàna i Safana mpanoratra, dia hitan'ny mpanjaka fa misy harem-pahalalana sy sakaiza mahery vaika ho amin'ny asa-panavaozana izay niriny fatratra hitranga teo amin'ny tany tao amin'ity boky ity. Nanapa-kevitra ny handeha amin'ny fahazavan'nytoroheviny izy, sy hanao izay rehetra tratry ny heriny mba hampahafantatra ny olona ny fampianarana raketiny, ary hitarika azy ireo, araka izay azo atao, mba hamboly fanajana sy fitiavana ny lalan'ny lanitra.
Kanefa azo atao ve ny hitondra ny fanavaozana nirina fatratra? Raha ny zavatra rehetra azony nianarana avy tamin'ny famakiana ilay boky teo anatrehany no jerena, dia efa saika nahatratra ny fatran'ny fandeferan 'Andriamanitra ny lsiraely. Tsy ho ela intsony dia hitsangana hanafay ireo izay nahafa-boninahitra ny anarany Andriamanitra. Efa nirehitra tamin'ny vahoakany ny fahatezeran'i Jehôvah . Nalahelo mafy no sady nivadi-po i Josia ka nandriatra ny fitafiany sy niankohoka teo anatrehan'Andriamanitra tamim-pahoriam-panahy, nangataka famelana ny heloky ny firenena tsy mety mibebaka.
Nonina tao Jerosalema, teo akaikin'ny Tempoly, ny mpaminanivavy Holda tamin'izany fotoana izany. Niverina tamin'i Holda ny sain'ny mpanjaka, izay feno ahiahy noho ny loza mananontanona. Koa nanapa-kevitra izy ny hanontany amin'i Jehôvah amin'ny alalan'io mpitondra hafatra voafidy io, mba hahafantarana, raha azo atao, raha toa ka misy fomba eo am-pelatanany hahazoany mamonjy an'i Joda mpaniasia, izay efa eo amoron-tevan'ny fandringanana ankehitriny.
Nitarika azy hisafidy ireo lehilahy ambony teo amin'ny fanjakana mba ho iraka ho any amin'ilay mpaminanivavy ny fahasarotan'ny toe-javatra sy ny fanajany ilay mpaminanivavy. "Mandehana hianareo," hoy izy nibaiko azy ireo, ka manontania amin 'i Jehôvah ho ahy sy ny vahoaka mbamin'ny Joda rehetra ny amin'ny tenin'ity boky vao hita ity, fa mafy ny fahatezeran'i Jehôvah izay mirehitra amintsika noho ny tsy nihainoan'ny razantsika ny tenin'ity boky ity hanao araka izay rehetra voasoratra ho antsika.» - RH, 22 Jolay 1915.